၀့ႈတကူဥသီခါကရ႕ခိဥက်႕ႈ Cardinal Charles Bo အတႈဃ့ကညး ဒုးဟူထီဥသါလီၚတႈလ႕ ပွၚကဆိကတီႈကြံဏ တႈတ့ဘွီထီဥထံတမ႕အဂီႈ
ပအိဥ၀ဲဒီးတႈသူဥအုးသးအုး ဒ္တႈဘဥဎိဏအိဥ၀ဲလ႕ (Irrawaddy) ထံက်ိမိႈပွႈကလီၚမဥကြံဏ၀ဲ မ့ႈလ႕ပွၚတ့ဘွီထီဥ၀ဲ ထံတမ႕လ႕ (Myit Sone) ဒ္အမ့ႈ၀ဲပွၚလ႕အဂံႈဆူဥဘါဆူဥ၀ဲသ့ဥတဖဥ အတႈသးကြံတႈဒိဥ၀ဲအါ၀ဲအဃိ ထံဖိကီႈဖိကိးဂၚဒဲး ဃ့ကညးတႈ ဃုဏဒီးပွၚလ႕အအိဥဒီးတႈသူဥဂ့ၚသး၀ါခဲလ႕ဏသ့ဥတဖဥ...
န႔ဆ႕ဥန႔ဥပဘဥကတီၚက့ၚ ဒ္အမ့ႈန႔ဆ႕ဥအသိး Enviroment 28.1.19
တႈလဲၚထီဥလဲၚထီ တႈသ့ဥညါနဥပ႕ႈအိဥအါထီဥ၀ဲအဃိ ပွၚတဂၚဒီးတဂၚ တသူဥမံသးမံလိဏသး ဃုထူဃုလြဲဃုက်ိဏဃုစ့ ခူထီဥတႈမ်ႈပလဲ ခူဥထူးထီဥလ႕ႈလ႕အလုႈဒိဥပွၚ့ဒိဥ၀ဲ ခူဥထုးထီဥ၀ဲလ႕ႈသြဲဥလး ထုးထီဥရ့ႈနီႈသိသ့ဥတဖဥ အါထီဥဒီးအါထီဥ၀ဲရုႈရုႈအဃိ န’ဆ႕ႈ ဟီဥခိဥ ထံ ကလံၚသ့ဥတဖဥ ဆီတလဲအသး တုၚဒဥလဲဥ...
ဖီဥထီဥစုမၚဃုဏသကိး တႈကတီၚထီဥက့ၚတႈဘဥတ့လ႕ ပခိဥပဃ႕ၚ
ပွၚကိးဂၚအိဥဒီးမူဒါလ႕ အကကြဥထြဲကဟုကဎဏက့ၚ န’ဆ႕ႈတႈအိဥအသး ဒ္သိးပကအိဥပူၚဖ်ဲးဒီး န’ဆ႕ႈတႈတတ႕ႈတနါသ့ဥတဖဥအဂီႈ နဥ့လီၚ’
န’ဆ႕ႈခိဥဃ႕ၚတႈရဲဥလီၚက်ဲလီၚ ဒံဥစ့ဘ႕ႈ ၂၄ သီ ၂၀၁၈
ဒံဥစ့ဘ႕ႈ ၂၄ သီ ၂၀၁၈
ဟီဥခိဥညဥလဏ လိဏဘဥ၀ဲဟီဥခိဥညဥထ့ဥယ ကလံၚယ ထံ ဒီး (Oxigen)သ့ဥတဖဥ’
ဟီဥခိဥညဥအမဲဏဖံးခိဥ လိဏဘဥ၀ဲကလံၚ (Carbondioxide)’
မူခိဥကလံၚသီဥဂီၚဒီးတႈကြႈထြဲတႈအခိဥအဃ႕ၚအတႈရဲဥလီၚက်ဲၚလီၚ ဒ့ဥစ့ဘ႕ႈ ၁၇ သီ ၂၀၁၈
ပွၚလ႕အသူဥထီဥဟံဥဃီလ႕သ့ဥ တနဥ့၀ဲသ့ဥတဖဥ သူဥထီဥ၀ဲလ႕၀ဥယ လ႕ဟံဥပူၚ ၀ဥ မ့ႈတႈလ႕ပွၚသူအီၚသ့၀ဲ လ႕တႈလီႈအါမံၚနဥ့လီၚ’. လ႕ပတႈအိဥမူအပူၚ ပသ့ဟံးနဥ့၀ဲတႈမၚလိလ႕၀ဥအအိဥ သ့၀ဲနဥ့လီၚ’. ခီဖ်ိလ႕ပွၚကညီသ့ဥတဖဥ အတႈမၚလ႕ႈဂီၚတႈမ့ႈဂ့ၚ ခီဖ်ိလ႕၀ဥသ့ဥတဖဥအနံဥအလါဎံဏ၀ဲမ့ႈဂ့ၚ ၀ဥသ့ဥတဖဥ စွၚလီၚ...
မူခိဥကလံၚသီဥဂီၚဒီးတႈကြႈထြဲတႈအခိဥအဃ႕ၚအတႈရဲဥလီၚက်ဲၚလီၚ ဒ့ဥစ့ဘ႕ႈ ၁၀ သီ ၂၀၁၈
န’ဆ႕ႈတႈတတ႕ႈတနါ မ့ႈတႈတမံၚလ႕ ပသ့ဥညါဆိအီၚတသ့၀ဲဘဥနဥ့လီၚ’ ဟီဥခိဥမ့ႈဟူးဒီး ပကဘဥကြႈဃုတႈလီႈလ႕ ပဘဥဒိဘဥထံးတသ့၀ဲတႈလီႈ ပတႈဘဥအိဥဘူးဒီးသ့ဥထူဥ မ့ႈအူတ႕ႈ တႈလီႈလ႕အလီႈပွီႈဒီး ကဲထီဥတႈဘဥဒိလ႕ပဂီႈ သ့၀ဲသ့ဥတဖဥဘဥနဥ့လီၚ’
ထံတႈဟ့ဥဘ်ဴးလ႕ဟီဥခိဥဖိဂီႈ ဒံဥစ့ဘ႕ႈ ၃ သီ
ႀက႕းလ႕ပကဘဥကတီၚက့ၚ ထံအဂံႈခီဥထံးယ ဒီးတႈဂ့ႈခီဥထံးလ႕အပ႕ၚဃဥထံ မ့ႈ၀ဲသ့ဥပွႈနဥ့လီၚ’ တႈလီၚပွီႈဟးဂီၚကဲထီဥအိဥထီဥခ့်၀ဲနဥ့လီၚ’
လ႕တႈကတီၚထီဥက့ၚ ထံယ ဟီဥခိဥယ သ့ဥပွႈအဂီႈ ပွၚကဘဥဟ့ဥတႈဆ႕ကတီႈ ဎံဏ၀ဲနဥ့လီၚ’
မူခိဥကလံၚသီဥဂီၚဒီးတႈကြႈထြဲတႈအခိဥအဃ႕ၚအတႈရဲဥလီၚက်ဲၚလီၚ နိ၀့ဘ႕ႈ ၂၆ သီ ၂၀၁၈
ကလံၚမုႈလီၚ၀ဲ အါတက့ႈဖဲ တႈစူၚခါအဆ႕ကတီႈနဥ့လီၚ’ ဖဲတႈကိႈအကတီႈ ထံလီၚသံး၀ဲလ႕ ထံက်ိယ နိဥဒီး ထံစွၚလီၚ၀ဲလ႕ပီႈလဲဥသ့ဥတဖဥအပူၚနဥ့လီၚ’ တႈကိႈဒိဥ၀ဲ ဒီးထံအသ၀ံသ့ဥတဖဥ လဲၚထီဥ၀ဲဆူထး ဆူကလံၚအကိႈ...
TO VIEW THE VIDEO: PLEASE CLICK THE VIDEO FILE BELOW
လ႕တႈဒိကနဥဒီးကြႈကီတႈဂီၚမူအဂီႈ ဆီဥလီၚတႈဂီၚမူအိဥဖဲအဖီလဏအံၚ ဒီးဒိကနဥကြႈကီအီၚသ့၀ဲနဥ့လီၚ